Fizarana traikefa momba ny dihy :: Manokatra varavarana ho an’ ny famoronana ny « Labdihy » • AoRaha
Fizarana traikefa momba ny dihy Manokatra varavarana ho an’ ny famoronana ny « Labdihy »
Mila Tosika. Ezahina hatrany ny hahamatihanina ny tontolon’ny dihy eto amintsika satria manana talenta sy famoronana miavaka ny mpandihy malagasy. « Ilaina ny hanampiana ireo mpandihy mba hahafahan’izy ireo mivelona amin’ny kantony. Manana fahazotoana sy fahasahiana ary famoronana tsara ny Malagasy. Efa afaka mitaha amin’ireo any ampitan-dranomasina any », hoy i Jason Louis, mpandihy avy any Maorisy, nizara ny fahaizany tamin’ireo mpandihy malagasy vao misandratra, tetsy amin’ny Cercle Germano-Malagasy (CGM/GZ) Analakely, omaly.
Nizara telo mazava tsara ny « Labdihy » : ho an’ireo mpandihy matihanina, ireo mpamorona efa za-draharaha ary ireo vao misantatra ny famokarana soradihy.
Mahatsapa i Ariry Andriamoratsiresy fa miha kely ny fotoana hifantohana tsara amin’ny kanto ho an’ireo matihanina. Maro ireo sehatra sahanina ka miaina amin’ny « tsaingoka » ny mpanakanto. Ilaina anefa ny mifaka lalina sy manokana fotoana hiofanana. Fandaharanasa ifantohan’ity andrarezin’ny dihy malagasy ity, aorian’ny Labdihy, ny fanolorana fanofanana misimisy kokoa.
Santatra ihany ny omaly. Andrasan’ny mpandihy malagasy ny hahafahan’izy ireo manitatra ny saham-pamoronany. « Hitako eto sahady fa ho maro ny soradihy hipoitra aorian’ity Labdihy ity. Ny teknika mety tsy hitovy fa eo amin’ny hevitra enti-mamorona sy enti-maneho ny ao an-tsaina no antenaiko fa hihatsara hatrany aorian’izao », hoy i Thierry, mpandihy avy amin’ny tarika Master Jah, avy any Antsirabe.
Nofaranana tamin’ny fandefasana sarimihetsika, famelabelaran-kevitra ary fanehoana ny soradihy « Fireneny » nataon’ny tarika Rary ny tontolo androm-panombohan’ny Labdihy. Hitohy ny fifampizaran’ireo mpandihy eto an-toerana sy avy any ivelany isa-maraina. Misokatra ho an’ny rehetra kosa ny fihaonana ny tolakandro, hatramin’ny sabotsy 17 aogositra ho avy izao.
Fahafatesana mpanakanto :: Nodimandry i Dany Ranoa, fanta-daza amin’ny famoronan-kira
Tantara tranainy :: Hita any amin’ny toeram-pivarotam- boky ny « Antananarivo Fahizay »